थोक केन्द्रीय निर्देशिका सूची बनाम बनाम द ग्लोब र खोजीहरू - कुन वेबसाइटले तपाईंलाई राम्रो सेवा प्रदान गर्दछ? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक जनवरी 1, 2021 डिसेम्बर 31, 2020 सबै-सितारा समीक्षा अर्जेन्टिना थोक र B2B, एशिया थोक र B2B, बंगलादेश थोक र B2B, बेल्जियम थोक र B2B, ब्लग, बेलायत थोक र B2B, बुल्गारिया थोक र B2B, व्यापार, क्यानाडा थोक र B2B, चीन थोक र B2B, चेकोस्लोवाकिया थोक र B2B, डेनमार्क थोक र B2B, DR कांगो थोक र B2B, सम्पादकको पिक, इजिप्ट थोक - B2B, फ्रान्स थोक - B2B, जर्मनी थोक र B2B, ग्लोबल थोक अनलाइन, ग्लोबल विश्व, ग्रीस थोक र B2B, ह Hongक Kong थोक र B2B, हंगेरी थोक र B2B, भारत थोक र B2B, इन्डोनेशिया थोक र B2B, इटाली पसल थोक र B2B, जापान थोक र B2B, केन्या शप ग्लोबल, मेक्सिको थोक र B2B, नाइजेरिया थोक - B2B, पाकिस्तान थोक र B2B, फिलिपिन्स थोक र B2B, रूस थोक र B2B, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, दक्षिण अफ्रीका थोक - B2B, दक्षिण कोरिया थोक र B2B, स्पेन थोक र B2B, थाईल्याण्ड थोक र B2B, टर्की थोक र B2B, युक्रेन थोक र B2B, थोक - B2B, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
गुगल २२ बर्ष पहिले शुरू भयो। त्यो अवधिको अवधिमा, तपाईंलाई लाग्छ कि wholesales र B22B उद्योगहरू सजिलै प्रयोग गर्न सकिने एक स्टप खोजीमा सर्नेछ?
विश्व र सबै भन्दा बढी उद्योगहरु पछिल्लो २० अधिक बर्षमा एक जबरदस्त रूपान्तरण को माध्यम बाट गएको छ ती मध्ये धेरैले अझ नयाँ आधुनिक र प्रयोग गर्न सजिलो टेक्नोलोजीमा पूर्ण नयाँ र उत्कृष्ट दृष्टिकोण प्रदान गरेका थिए जसले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अझ बढी सक्षम बनाउँदछन्, र एकल वेबसाइटमा विश्वव्यापी पहुँच बढाउँछन्।
हामी विश्वास गर्दछौं कि यस प्रकारको माइग्रेसन व्यवसायको प्राकृतिक विकास हो र होलसेल र बी2बी उद्योगलाई यसको एकदम नराम्ररी आवश्यकता छ।
तल केहि धेरै साधारण तुलनाहरू छन्:
थोक केन्द्रित VS ग्लोब किन्नुहोस्
महँगो अप फ्रन्ट। लिस्टिंग लागत नि: शुल्क।
सेवाको धेरै स्तरहरू, अवरोधहरू, यसलाई बनाउँदै
यसमा नम्बर राख्न गाह्रो छ। कुल खर्च प्रत्येक बिक्रीको एक अंश चार्ज गर्दै
मात्र लागत छ। कुनै बाधा छैन।
प्राप्त गर्न गाह्रो। सेट अप तिनीहरू तपाईं संग काम।
पहुँचको धेरै स्तरहरू, बुझ्न कठिन छ। सजिलो प्रयोग द्रुत, सटीक र सरल खोजीहरू।
संग थोक केन्द्रिय, हामीले हाम्रो उत्पादनहरूको सूची बनाउने कोशिश गरेका थियौं तर त्यस समयमा प्रणालीले काम गरेन र हामीलाई हरेक पटक अस्वीकार गर्‍यो। ग्लोब किन्नुहोस् केहि कसैले हामीसँग सम्पर्क गरे र उनीहरूको प्रक्रियामा हामीलाई हिडे
उत्पादनहरूको लागि क्रेता खोजी:
आदिम। खोज छिटो, खुला र इमानदार खोजीहरू।
मुख्य रूपमा मितिबद्ध मिति अनुक्रमणिका प्रणाली प्रयोग गर्नुहोस्
वा अंग्रेजीमा निर्देशिका। निर्देशिका प्रत्येक भाषामा ग्राफिकल।
हामीले प्रयोग गर्यौं थोक केन्द्रिय खोज लगभग पुस्तकालय मा डेवी दशमलव प्रणाली को प्रयोग जस्तै हो। पछि पुस्तकालयहरूले सरल खोजी थप्न कोसिस गर्‍यो, जुन अत्यधिक अनुरोध गरिएको विकल्प थियो तर लाइब्रेरीहरू अझै पनि डेवी दशमलव प्रणालीमा निर्मित भएका हुनाले तिनीहरूको खोजहरू एकदमै ढिलो र अनाड़ी थिए जसलाई स्थापित डाइरेक्टरीको शीर्षमा खोजी प्रदान गरिएको थियो।
तपाईं को रूप परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ थोक केन्द्रिय, तर यो अझै पनि एक पुरानो शैली को सूची निर्देशिका जस्तै लाग्छ। ग्लोब किन्नुहोस् पूर्ण खोज क्षमताहरूको पहुँच गर्न सजिलो छ जुन खरीददारहरूको लागि शपिंग गर्न सजिलो हुन्छ। मा उत्पादनहरू खोज्न थोक केन्द्रिय, तपाईं धेरै अलग वेबसाइटहरू, पर्दा, बाधा र लागतहरूमा जानुपर्दछ, सम्पूर्ण प्रक्रियालाई धेरै समय उपभोग गर्दै, र हामीलाई धेरै भ्रमपूर्ण बनाउँदछ। B2B र थोक खरीददारहरूको लागि, दुई दोस्रो खोजीमा ग्लोब शप गर्नुहोस् - तपाईंले खोजिरहनु भएको सूचीको क्रमबद्ध सूची प्रदान गर्दछ।
सबै प्रमुख मुद्दामा ग्लोब किन्नुहोस् आउटप्रुफर्ड:
थोक केन्द्रिय VS ग्लोब किन्नुहोस्
यस्तो देखिन्छ कि उनीहरूले तिनीहरूको सूचीबाहेक अरू केहि पनि सूचीबद्ध गर्दैनन्
दशकौं पुरानो निर्देशिका। मार्केटिङ उत्पादनहरु को बारे मा दैनिक लेखहरु, सूचीबद्ध र समाचार प्रकाशित।
उत्पादनहरूलाई आक्रामक रूपमा प्रमोट गर्न मद्दत गर्दै।
धेरै ढिलो र मिति सकिएको अनुक्रमणिका प्रणालीमा फोकसहरू। खरीददार विचारहरु खोज्दै प्रत्येक प्रमुख भाषामा द्रुत खोज र ग्राफिकल अनुक्रमणिका।
केवल अंग्रेजी - अनुवाद प्रदान गरिएको छैन भाषा सूचीबद्ध प्रत्येक उत्पादनको लागि १०० भन्दा बढी भाषाहरूमा तत्काल खोजी।
डलर र पाउन्ड रूपान्तरण प्रदान गरिएको छैन। मुद्रा तपाईं अवस्थित भएको देशको प्रमुख मुद्रामा उद्धृत।
प्रमुख मुद्राको लागि विकल्पहरू प्रयोग गर्न सजिलो सूचीबद्ध गर्दछ।
थोक केन्द्रिययो देखिन्छ, जब इ England्ल्याण्ड र संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र ठूला उत्पादनहरू बेच्ने प्रमुख निर्यातकर्ताहरू थिए। ग्लोब किन्नुहोस् नयाँ हो, र ग्लोबल, सरल, कुनै पनि देशबाट खोजी खोजी गर्न सजिलोको साथ डिजाइन गरिएको थियो। उनीहरूले अधिक प्रभावी एक-स्टप थोक अनुभव सिर्जना गरे जुन धेरै अपूर्व वैश्विक सुधारहरूको प्रयोग गर्दछ।
सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक बारेमा थोक केन्द्रिय के योसँग धेरै ठूलो लिस्टिंग र स्थापित डाटाबेस छ। वर्षौंको लागि स्थापित नेता हुनुको धेरै फाइदाहरू छन्।
को लागी फाइदाहरु ग्लोब किन्नुहोस् के यो छिटो बढ्दै गइरहेको छ, र अझ राम्रो समग्र समाधान प्रदान गर्दछ जुन खरीददारहरू र थोक शपर्सहरूले यसलाई मनपराउँदछन्, किनकि तिनीहरूले अधिक धेरै र कुशल काम गर्न सक्दछन् - समय र पैसा बचत गर्दा राम्रो खरीदहरू भेट्टाउँछन्।
B2B सांप्रदायिक समाचार ग्लोब किन्नुहोस् थोक
हामी अनलाइन जनतामा अज्ञात उत्पादन समीक्षा ल्याउन मद्दतको लागि उपभोक्ता वस्तुहरू र साना विक्रेताहरू र आला उत्पादकहरूको सेवाहरूको समीक्षा गर्दछौं।
नयाँमा रिंग आउट आउट पुरानो –
यमन - अडेन एयरपोर्टमा हमला 26 मारियो